JEREMIA 10.1-25	F. 3 | Fitandremana Ankadifotsy
JEREMIA 10.1-25	F. 3
TSY MISY NY TOA AN’ANDRIAMANITRA
Manoloana ny sampy. Nanamarika ny vanim- potoana niainan’i Jeremia ny sampy teo amin’ny firenena. Mbola izany ve ny zava-misy ankehitriny ? Inona avy ny endrika sampy hitanao eo amin’ny fiaraha-monina ? Aiza ? Ry zanak’Andriamanitra o, tehirizo ho masina, lavitry ny sampy, ny sainao, ny fiteninao ary ny fitondrantenanao, eto amin’ity izao tontolo izao feno fifankazarana amin’ny sampy ity (2). Misy hery manosika miafina, avy amin’Ilay Ratsy, ao anatin’ny famosaviana, ny fanandroana, ny fanaovana hatsarana sy ny fitadiavana hery miafina rehetra. Nefa dia ambara fa zava-poana izy rehetra ireo (5-9). Andriamanitra no Tompon’izao rehetra izao. Hita ao amin’ny zavatra nohariany ny fahalehibiazany sy ny fiandrianany (12-13). Izy no hany Tsitoha !
Ny fitondrantena mety ? Manoloana ny zava-mitranga dia matetika fanomezan-tsiny, fimonomonomana, fikomiana sy fangindiana no asetrin’ny maro izany. Fa misy kosa ny miaiky ny fahalemeny sy ny fahadisoany ka mangataka fanasitranana amin’Andriamanitra : matoky ny fitiavan’Andriamanitra izy ireo (23-24). Inona no asetrinao ny ady mafy atrehinao ?
Vavaka ho an’ny hafa (23-25). Mametraka ny tenany ho isan’ny fireneny i Jeremia ary mangataka ny tsy hamaizan’Andriamanitra ny vahoakany araka ny fahatezerany.
Hosaintsainina : Manoloana ny loza ara- nofo sy ara-panahy iainan’ny firenentsika, inona no ataontsika ? Ndeha hianatra amin’ny Tompo Jesoa ka hijoro hivavaka ho an’ny mpiray firenena mba hihavanany amin’Andriamanitra !